२०७६ असार १३ गते २१:१८
तिलिंगाटार माविको उत्कृष्ट एसइइ नतिजा
काठमाडौं । धापासी स्थित तिलिंगाटार माविले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइइमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको छ । विद्यालयबाट एसइइ परीक्षामा सहभागी १५७ विद्यार्थी मध्ये १ जनाले ३.६० देखि ४.० जीपीए, ३४ जनाले नै ३.२५ देखि ३.६० जीपीए प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, ४८ जनाले २.८५ देखि ३.२० र ३८ जनाले २.४ ...
२०७६ असार १३ गते १४:१६
आर्दशसौल माविको एसइइ नतिजा, १६ जनाले ल्याए ३.६ माथिको जीपीए
ललितपुर । ललितपुर सैंबु स्थित आदर्शसौल युवक माविले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइइमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको छ । विद्यालयबाट एसइइ परीक्षामा सहभागी १६५ विद्यार्थी मध्ये १६ जनाले ३.६० देखि ४.० जीपीए, ४३ जनाले नै ३.२० देखि ३.६० जीपीए प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, ४४ जनाले २.८० देखि ३.२० र ३७ जनाले २.४० ...
२०७६ असार १३ गते १३:३८
कालिका मानवज्ञान माविको नतिजा निजीको भन्दापनि उत्कृष्ट, १५ जनाले ल्याए ४ सहित ३.९ जीपीए
बुटवल । बुटवल स्थित कालिका मानवज्ञान माविले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइइ नतिजामा जिल्लाका सबै निजी विद्यालयहरुलाई समेत उछिनेको छ । विद्यालयबाट एसइइ परीक्षामा सहभागी ३७१ विद्यार्थी मध्ये १५ जनाले ४ सहित ३.९ माथिको जीपीए प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै ५० विद्यार्थीले ३.८ माथिको जीपीए प्राप्त गरेका छ ...
२०७६ असार १३ गते ११:५२
नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविका १६ जनाले ल्याए ३.६० देखि ४.० जीपीए
रुपन्देही । बुटवल देवीनगर स्थित नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइइमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको छ । विद्यालयबाट एसइइ परीक्षामा सहभागी १६० विद्यार्थी मध्ये १६ जनाले ३.६० देखि ४.० जीपीए, ४१ जनाले नै ३.२५ देखि ३.६० जीपीए प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, ४८ जनाले २. ...
२०७६ असार १३ गते १०:४०
नारायणी नमूना माविको नमूना नतिजा, ८३ विद्यार्थीले ल्याए ३.६० देखि ४.० जीपीए
चितवन । चितवन भरतपुर स्थित नारायणी नमूना माविले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइइमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको छ । विद्यालयबाट एसइइ परीक्षामा सहभागी २८१ विद्यार्थी मध्ये ८३ जनाले ३.६० देखि ४.० जीपीए, ९७ जनाले नै ३.२५ देखि ३.६० जीपीए प्राप्त गरेका छन् । पूर्णप्रसाद दवाडी यसैगरी, ५३ जनाले २.८५ देखि ...
२०७६ असार १३ गते ०९:२१
सिद्धबाबा माविका १७ विद्यार्थीले ल्याए ३.६० देखि ४.० जीपीए
गुल्मी । गुल्मी तम्घास स्थित सिद्धबाबा माविले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइइमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको छ । विद्यालयबाट एसइइ परीक्षामा सहभागी ११३ विद्यार्थी मध्ये १७ जनाले ३.६० देखि ४.० जीपीए, ४५ जनाले नै ३.२० देखि ३.५५ जीपीए प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, ३५ जनाले २.८० देखि ३.१५ र १६ जनाले २.६ द ...
२०७६ असार १३ गते ०९:०९
प्रगति शिक्षा सदनको एसइइको प्रगति
ललितपुर । ललितपुरको प्रगति शिक्षा सदन माध्यमिक विद्यालयले एसइइमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको छ । विद्यालयबाट एसइइ परीक्षामा सहभागी ३० विद्यार्थी मध्ये ३ जनाले ३.६० देखि ४.० जीपीए, ३ जनाले नै ३.२० देखि ३.६० जीपीए प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, ११ जनाले २.८० देखि ३.२०, ९ जनाले २.४० देखि २.८० र ४ जना विद्य ...
२०७६ असार १३ गते ०८:४३
काठमाडौं । समग्रतामा एसइइको नतिजामा सुधार आएपनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा भने कमजोर पाइएको छ । मुलुकभरको नतिजा हेर्दा ग्रेडिङ पद्धति सुरु भएपछि यसपटक एसइइको समग्र नतिजा प्रतिशत उच्च देखिन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एसइइ नतिजाअनुसार १.६ देखि ४ जीपीएसम्म ल्याउने विद्यार्थीक ...
२०७६ असार १३ गते ०७:४९
एसइइको प्रदेशगत नतिजा : प्रदेश ३ अब्बल, प्रदेश २ कमजोर
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपटक पहिलोपटक प्रदेशगतरुपमा एसइइ परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । विहिवार बोर्ड अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । अनिवार्य विषयतर्फ सातै प्रदेशमा फरक–फरक प्रश्नपत्र अनुसार परीक्षा लिइएको थियो । प्रदे ...
२०७६ असार १३ गते ०७:४७
७ कलेजलाई इन्जिनियरिङमा अस्थायी स्वीकृति
काठमाडौँ । सरकारले सात कलेजलाई इन्जिनियरिङ अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकको निर्णयअनुसार सूचना प्रविधिको बीई कार्यक्रममा काठमाडौं बुद्धनगरको एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेजले ९६, बीई कम्प्युटर इन्जिनियरिङतर्फ गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स लामाचौर पोखरालाई ...
२०७६ असार १२ गते २२:१७
काठमाडौं । एसइइ परीक्षामा बुटवलकी निकिता खनालले सबै विषयमा ए प्लस प्राप्त गरेकी छन् । बुटवल शंकरनगरको सिद्धार्थ इंलिस बोर्डिङ स्कूलबाट परीक्षा दिएकी उनले सबै विषयमा ए प्लस ल्याएर ४ जीपीए प्राप्त गरेकी हुन् । उनको सिम्बोल नम्बर ०४८३४४४Z रहेको छ । कक्षा १ सम्म स्कलर्स होम बोर्डिङ स्कूलमा पढेकी ...
२०७६ असार १२ गते २१:०५
सांसद शान्ता चौधरीको २.६५ र नायिका करिश्मा मानन्धरको ३ जीपीए !
काठमाडौं । यस वर्ष एसइइ परीक्षा दिएका सांसद शान्ता चौधरीले २.६५ जीपीए र नायिका करिश्मा मानन्धरले जीपीए ३ प्राप्त गरेका छन् । सांसद चौधरीले महेन्द्र मावि तुलसीपुरबाट र करिश्माले काठमाडौंको विजयस्मारक माविबाट परीक्षा दिएकी थिइन् । एसइइ परीक्षा दिए देखि नै यि सेलिब्रेटि चर्चामा रहँदै आएका थिए । प ...
२०७६ असार १२ गते १६:००
एसइइको नतिजा सार्वजनिक(नतिजाको लिंक सहित)
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइइ परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । ग्रेडिङ प्रणालीमा नतिजा प्रकाशित भएकाले कोही पनि फेल नहुने परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । यस वर्षको एसइइ परीक्षामा ४ लाख ५९ हजार २७५ जना परीक्षार्थी संलग्न थिए । सार्वजनिक भएको नतिजा अनुसार जीपीए ३.६५ देखि ४ सम्म ल्याउने ...
२०७६ असार १२ गते १०:१५
काठमाडौंमा । भूकम्प प्रभावित विद्यालय पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । बुधवार मात्रै काठमाडौंका ४ विद्यालयलाई नयाँ भवन हस्तान्तरण गरिएको छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई(शिक्षा)काठमाडौंले बुधवार एकैदिन काठमाडौंका ४ विद्यालयलाई नवविर्मित भवन हस्तान्तरण गरेको हो । इ ...
२०७६ असार १२ गते ०८:५७
एसइइ नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी, दिउँसो बोर्ड बैठक बोलाइयो
भक्तपुर । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ)को नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ । यसका लागि बिहीबार दिउँसो बोर्ड बैठक बोलाइएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । बुधवार नै एसइइ नतिजा सार्वजनिक हुने समाचारहरु प्रकाशित भएका भएपनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले खण्डन गरिदिएको थ ...
२०७६ असार ११ गते २२:०३
चाइनाका विद्यार्थी रोवर्ट बनाइरहँदा यहाँ प्रश्नपत्र किनबेच र चिट !
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा छलफल भइ सामाजिक समितिमा पुगेको खुलासा गरेका छन् । मस्यौदा केही समयमै पारित हुने चरणमा रहेको मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले शिक्षाका तमाम् समस्या समाध ...
२०७६ असार १० गते २१:३८
सल्यानमा इकाइ प्रमुख वली घुसको रकमसहित पक्राउ
सल्यान । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सल्यानका प्रमुख धनबहादुर वली घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतको टोलीले उनलाई २५ हजार नगद रुपैयाँ घुस लिएको रकमसहित पक्राउ गरेको हो । गएको वैशाख ११ गतेदेखि सल्यानमा इकाई प्रमुखको रूपमा कार्यरत वलीलाई शिक्षक सरुवाको सहज ...
२०७६ असार १० गते ०९:१७
विराटनगर । कोसी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाको गंगाचोकमा इन्धन बोक्ने ट्यांकरको ठक्करबाट सोमबार बिहान ११ बजे एकजना शिक्षकको मृत्यु भएको छ । सिरहामा डिजेल पुर्‍याएर विराटनगर फर्कंदै गरेको ना ४ ख १९०५ नम्बरको ट्यांकरले ठक्कर दिंदा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–४ घर भएका २९ वर ...
२०७६ असार १० गते ०८:५६
चितवन  । दुई छोरी मात्रै जन्माएर स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने दम्पतीलाई माडी नगरपालिकाले विशेष सुविधा दिने भएको छ । दुवै छोरीलाई नगरपालिकाले माडीभित्रै १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढाउने छ । सोमबार सुरु नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभामा उपमेयर ताराकाजी महतोले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो ...
२०७६ असार १० गते ०८:५०
काठमाडौँ  । ११ वर्षीय समीर लुङवा ललितपुरको वाग्मती गाउँपालिका २ माल्टास्थित कालीदेवी माविमा कक्षा ५ मा पढ्थे । शनिबार राति बुबाआमा घरमा नभएको मौका छोपेर उनले आफैंलाई सिध्याए । अभिभावकहरू राति साढे ९ बजेतिर घर फर्किंदा समीर दलिनमा पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे । प्रहरीले उनको साथबाट सु ...
२०७६ असार १० गते ०८:४४
बर्दिया । बढैयाताल गाउँपालिकाले केन्द्रको शिक्षा नियमावली खारेज गरी आफैं कानुन बनाएर नियुक्त गरेका २६ शिक्षकले तलब पाएका छैनन् । पालिकाले बनाएको नियमावली विवादमा परेपछि ती शिक्षकलाई चैतदेखिको तलब निकासीमा समस्या देखिएको हो । शिक्षा शाखाले गरेको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि पालिकाकै प्रशासन शाखाले निय ...
२०७६ असार १० गते ०८:४०
गोरखा । गोरखा नगरपालिका–११ को सेन्ट जोसेफ बोर्डिङ स्कुलमा एक बालकलाई यातना दिएको दाबी गर्दै प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको छ । किताब नल्याएको भन्दै कक्षा ५ का १० वर्षीय श्रीयन्स श्रेष्ठलाई विज्ञान शिक्षिका मनीषा मगरले सोमबार कुटपिट गरेको पीडित पक्षको आरोप छ । ‘छोराको ढाडभरि नीलडाम छ,&rs ...
२०७६ असार ९ गते १५:३१
इसिडि र विद्यालय कर्मचारीको सुविधा बढाउन प्रधानमन्त्री सहमत, अस्थायी शिक्षकको माग पुरा नहुने
काठमाडौं । प्रारम्भिक बालविकास(इसिडि)मा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमति जनाएका छन् । आइतबार राती ९ बजे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापासँगको भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले इसिडि शिक्षक र विद्या ...
२०७६ असार ९ गते ११:१८
११ औँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड रिलायन्स इन्टरनेसल एकेडेमीलाई
काठमाडौँ । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा आयोजित एघारौँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकूद प्रतियोगितामा रिलायन्स इन्टरनेसनल एकेडेमीले प्रथम स्थान हासिल गरेको छ । १२१ विद्यालय रहेको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा रियाले सबैभन्दा बढी स्वर्ण, रजत र कास्य पदक जित्दै शिल्ड आफ्नो हातमा पारेको थियो । यसअघि पनि वि.स ...
२०७६ असार ९ गते १०:५६
एकैपटक समुदायले नपत्याएका ५४ शिक्षकको सरुवा गरिदियौं–उपमेयर बस्नेत
काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले समुदायले २५ वर्ष पुराना शिक्षकहरुलाई सार्न भनेपछि एकैपटक ५४ शिक्षकहरुको सरुवा गरिदिएको बताइन । शिक्षकहरुको सरुवा गर्दा एकखालको भूँइचालो नै गएको भन्दै बस्नेतले यसले गर्दा १५ दिन निदहराम भएको स्पष्ट पारि ...
२०७६ असार ९ गते ०९:११
जनकपुरधाम । देशमा अनेक राजनीतिक परिवर्तन आए पनि तराईका दलितमध्ये सबभन्दा पिछडिएका मुसहर समुदायको अवस्था उस्तै छ। उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थामा अझै पछाडि छन्। नेपालमा २२ वटा जातिलाई दलित समुदायमा समावेश गरिएको छ। तीमध्ये ५ वटा पहाडी र १७ वटा मधेसी मुलका छन्। यो समुदाय शिक्षा, स्वास् ...
२०७६ असार ९ गते ०९:०४
कालिकोट । बूढानीलकण्ठ स्कुलमा १० कक्षासम्म पढाउने आश्वासन पाएपछि पचालझरना–५ का ठोसे नेपालीले ७ वर्षीय छोरालाई १ लाख २५ हजार रुपैयाँ ऋण काढेर काठमाडौं पठाए । उनलाई लागेको थियो– धूलोमाटोसँग खेल्ने छोरो राजाका छोराछोरी पढ्ने स्कुलमा गएपछि भविष्य चम्किनेछ । तर अहिले भन्छन्, ‘छोरा ...
२०७६ असार ९ गते ०८:४४
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ९ नम्बर ल्याएका विद्यार्थीलाई ६० नम्बर थपेर ‘गोल्ड मेडल’ दिलाएको खुलासा भएको छ । स्नातकोत्तर तहको एक विषयमा ९ नम्बर ल्याएका सुरेन्द्र कोइरालालाई पनिका कर्मचारीले ६९ नम्बर दिएर ‘सर्वोत्कृष्ट’ बनाएका हुन् । ...
२०७६ असार ८ गते ०९:०६
यसवर्ष सबै अस्थायी शिक्षकले सुविधा पाउँछन्– महानिर्देशक पौडेल
काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले यसैवर्ष भित्र सबै अस्थायी शिक्षकहरुले सुविधा पाउने बताएका छन् । सुविधा रोजेका र आन्तरिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई छिट्टै सुविधा दिन शुरु गरिने पौडेलले स्पष्ट पारे । आको शिक्षा साप्ताहिकले आयोजना गरेको अन ...